healthy life style – Page 13 – Healthy Life Journal
ခံတွင်းရနံ့ သင်းပျံ့ပါစေ . . .
———၊ ဇွန် ၊——— အနံ့ဆိုးထွက်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဟာ သွားဖုံးတွေ၊ လျှာတွေနဲ့ သွားတွေမှာ ကပ်ညိနေတတ်တာကြောင့် သွားနဲ့ခံတွင်း သန့်စင်ထိန်းသိမ်းမှုကို စနစ်တကျမလုပ်ရင် ခံတွင်းအနံ့ဆိုး ထွက်နေနိုင်ပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းကို ပျောက်ကင်းအောင် အမြန်ကုသနည်း ပါးစပ်ခြောက်တာဟာ အနံ့ဆိုးထွက်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအတွက် နားခိုရှင်သန်ရာ နေရာကောင်းပါပဲ။...
ဘာကြောင့် … အကြောဆန့်သင့်တာလဲ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— လေ့လာမှုတွေအရ အကြောဆန့်ပေးတာက ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ခံစားမှု၊ ဘဝရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းမှုတွေကို ကောင်းမွန်တိုးတက်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လတ်တလော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဂျပန်သုတေသီတွေက အသက် ၂၀ နဲ့ ၈၃ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသား ၅၀ဝ...
အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့သော ချောင်းဆိုးဝေဒနာ
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ တချို့လူတွေမှာ ချောင်းဆိုးတဲ့ဝေဒနာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့မှာတော့ မကျန်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။ A. ပုံမှန်က အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်ရင်...
ဆောင်းရာသီတွင် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနည်းများ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဆောင်းရာသီမှာ သက်သောင့်သက်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် အလွယ်နည်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) သစ်ပင်ပန်းပင် စိုက်ပျိုးပါ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တာကြောင့် ဥယျာဉ်မှူးတွေမှာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင်ဓာတ်တွေ အထွက်တိုးလာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သစ်ပင်တွေကို...
ဆောင်းရာသီမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ထိုင်းမှိုင်းပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ . . .
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဆောင်းရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ထိုင်းမှိုင်းပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတော့ . . .။ ♦ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပါ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးတာက စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ဓာတ်တွေ အထွက်တိုးစေပြီး စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါတယ်။ ♦ နေခြည်နုနုကို...
အိပ်ရာမဝင်ခင် နွားနို့သောက်သင့်ရခြင်း အကြောင်းရင်း (၄) ရပ်
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နွားနို့မှာ အာဟာရဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပြီး အရိုးကျန်းမာစေပါတယ်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် နွားနို့သောက်ပေးရင် မြန်မြန်အိပ်ပျော်စေသလို အိပ်ရေးဝဝ အိပ်မောကျစေပါတယ်။ သန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ လန့်နိုးလာတာ မဖြစ်တော့ဘဲ တစ်ညလုံး အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပျော်စေသလို ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ထိန်းပေးပါတယ်။ (၁)...